Goobjoogayaal ayaa sheegay in qof aan la garanayn uu rasaas ku furay askariga oo ku sugnaa bartamaha magaalada, iyadoo ay goobtaas gaareen ciidammo fara badan oo ka tirsan kuwa Kenya, kuwaasoo gacanta qabqabtay dad fara badan.
"Askariga waxaa lagu furay rasaas isagoo sugidda ammaanka ka shaqeynayay, waxaa gaaray dhaawac fudud, iyadoo falkan uu noqonay kii ugu horreeyay noociisa oo ka dhaca gudaha Gaarisa," ayay tiri Raxmo Axmed oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Gaarisa.
Ciidamada Kenya ayaa illaa saakay aroortii baaritaanno kawaday degmada Gaarisa waxaana weerarkan uu qayb ka noqonayaa weerarro dhowr ah oo degamdaas ka dhacyay muddo hal sano, laga soo billaabo markii ciidamada Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya bishii Oktoobar ee sannadkii hore.
"Baaritaanno ayaa lagu sameeyay xaafaddeenna iyo xaafado ku dhow-dhow oo ku teedsan halkii ay xalay rasaastu ka dhacday, runtii dad badan ayaa la qabqabtay mana garanayno sababta keentay in askariga amaanka sugaya rasaas lagu furo," ayay Raxmo hadalkeeda raacisay.
Ma jiro hadal kasoo baxay booliiska degmada Gaarisa iyo kan gobolka Waqooyi-bari ee Kenya oo ku aaddan rasaasta xalay lagu furay askariga ka tirsan ciidamada Kenya ee nabadda sugayay.
Dalka Kenya ayaa wuxuu tan iyo sannadkii hore ka tacaalayay xallinta weerarro soo laalaabtay oo ka dhacayay gudaha dalkaas, iyadoo la xusuusto in weerar lagu dilay sarkaal ka tirsan booliiska Kenya tiro kalena lagu dhaawacay uu maalin ka hor ka dhacay magaalada Mombasa.